फोटो खिच्न भए पनि जानै पर्ने रेस्टुरेन्ट - Nepal News Site
१२ पुष २०७६, शनिबार १०:०८
बन्दिपुर घुम्ने कि फेवाताल ? समुन्द्रमा डुब्ने कि अन्तरिक्षमा रम्ने ? चिहानमा पसेर मुटु कमाउने कि पहाड र झरनासँग हो रमाउने ? यो सबै कुराको अनुभव अब एकै ठाउँमा गर्न पाउने । एकचोटी जानै पर्ने ठाउँ वान डे थ्री डी रेष्टुरेन्ट । थ्री डि भित्तेकलासँगै रेष्टुरेन्ट व्यवसायको कुरा ।
बाहिरी मोहोडामै परम्परागत घर र साना गल्ली देखिन्छन्। गल्लीमा एउटा फल्चा ९पाटी० छ, जहाँ जेष्ठ नागरिकहरू भलाकुसारी गरिरहेका भेटिन्छन्। पर डाँडामा स्तुप देखिन्छ। यो काठमाडौं उपत्यकाको परम्परागत संरचना झल्काउने कुनै ठाउँ होइन, ललितपुर कुमारीपाटीको रेस्टुरेन्टको बाहिरी भित्तो हो।
अचेलका होटल, रेस्टुरेन्टमा कलात्मक चित्र बनाएर ग्राहक आकर्षित गर्नु सामान्य भइसक्यो। वान डे थ्रिडी आर्ट रेस्टुरेन्टु का भित्तेचित्रको विशेषता भने फरक छ। बाईट तीनतले रेस्टुरेन्टका सबै कोठामा विशेष थिम का थ्रिडी चित्र भेटिन्छन्। घर, साना गल्ली र फल्चा कटेर अलि भित्र पस्दा बरन्डामा थ्रिडी पुल कुँदिएको छ।छेउमा खोला, पहाड अनि झर्ना।
पहिलो तलामा चार कोठा छन्– भान्सा, किड्स (केटाकेटीका निम्ति), पिस (शान्त) र बार लबी। जहाँ प्रत्येक कोठाअनुसारको संगीत छ। दोश्रो तला उक्लीदै गर्दा सिँढीछेउका भित्तामा प्राचीनता झल्कने इँटा छन्। हिँड्दै गर्दा भित्ताको प्वालमा देखिन्छ, बिरालो । अलि माथि पुगेपछि सिढीँमै बसिरहेकी छिन् बुढी आमा । बाईट दोस्रो तलामा आक्वा रुम, डिजाइन गरिएको छ। सँगै टाइटानिक रुमु। माथि छत र भुँइमा पानी कै डिजाइन छ।
भित्तामा माछा, जलपरी लगायत चित्र। त्यहाँ पुग्दा पानीको बुलबुल आवाज सुनिन्छ। अर्को कोठा ुस्पेस रुम हो, साइन्स फिक्सन, मन पराउनेले यो कोठा छान्दा हुन्छ। संगीत पनि त्यस्तै हुँदा अर्कै संसार पुगेको जस्तो महशुस हुन्छ।अर्को कोठा स्केरी रुम अर्थात् डरलाग्दो चिहान घर। बाईट अर्को कोठा हो सांगीतिक।
नारायणगोपालदेखि लता मंगेश्कर र अन्जु पन्तसम्मका चित्रले भिरिएको। कोठाहरूका बीच भागको भित्तामा जिराफको थ्रिडी छ। त्यहाँबाट माथिल्लो तलामा ठूलो हल छ। हलमा काठमाडौं सभ्यता झल्काउने मान्छे र सम्पदाका चित्र। करिब ६० जना क्षमताको हलमा पशुपति, स्वयम्भूसँगै सत्यमोहन जोशी, पुष्कर शाह लगायत कुँदिएका छन्।
यो सबै कला चित्रकार ओमप्रकाश विश्वकर्माको देन हो । जो बाल्यकाल देखि नै कला भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे । बाईट कामकै शिलशिलामा बैंकक जाँदा उनीहरुले खानामा भित्तेकलाको स्वाद चाख्न पाए । कलाका पारखी उनीहरुले पनि त्यस्तै व्यवसाय गर्ने योजना बनाए । साधारण कंक्रिटको घरलाई भित्तेकला संग्रालयको स्वरुप दिए ।